Wasiirka Warfaafinta iyo Masuuliyiin kale oo Isbitaalka ku booqday Agaasime Bahlaawi, Waa Sidee Xaaladda Agaasimaha,?+Sawiro – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 Last updated Jul 5, 2017
Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Federaalka Somalia, C/raxmaan Cumar Cismaan-Eng Yariisoow oo ay wehliyaan qaar ka mida Agaasimiyaasha Wasaaradda Warfaafinta, iyo Agaasimaha Telefeshinka Horncable ee Koonfurta Somalia, C/qaadir Dulyar ayaa ku booqday Agaasime Bahlaawi Isbitaalka lagu dawaynayo. Wuxuuna Wasiirku sidoo kale Warbixin la xiriirta Xaaladda Caafimaad ee Agaasimaha ka dhagaystay Dhaqaatiirta Isbitaalka oo sheegay in Caafimaadka Agaasimuhu soo hagaagayo, isla markaana ay ku guulaysteen Qaliin kooban oo ay Xalay kaga sameeyeen Garabka.
Xildhibaano ka tirsan Labada Aqal ee Baarlamaanka Somalia, Saraakiil, Wariyayaal, iyo Dadwayne ayaa ku illaa iyo maanta buux dhaafiyay Isbitaalka lagu dawaynayo Agaasime Bahlaawi, kuwaasoo u muujinayay Agaasimaha siday uga xun yihiin Weerarkii Argagixisanimo ee lagu dhaawacay.
Agaasime Bahlaawi ayaa isna Dhiniciisa waraysi uu siiyay Telefeshinka Horncable Tv wuxuu sheegay in imminka Caafimaadkiisu soo hagaagayo, isagoona uga mahad celiyo Dhaqaatiirta iyo Shaqaalaha Caafimaad ee Isbitaalka Gurmadka ay u sameeyeen.
Agaasime Bahlaawi ayaa Shalay Qarax lagula bartilmaameedsaday Agagaarka Dalcadda Taleex, iyadoona halkaasi uu ku dhaawacmay Agaasimaha iyo Darawalkiisa. Waxaana Weerarkan sheegtay Masuuliyadiisa Kooxda Alshabaab.
Wariye Dulyar oo booqday Ag Bahlaawi